Ogaden News Agency (ONA) – BBC – Ingriiska oo lagu eedeeyey inuu wax ka ogaa dhiibitaanka Andargachew Tsege
BBC – Ingriiska oo lagu eedeeyey inuu wax ka ogaa dhiibitaanka Andargachew Tsege
Afheyeenka ururka mucaaradka ku ah xukuumadda Wayaanaha Mr. Ephrem oo saldhigiisu yahay Mareykanka oo BBC ay wareysatay ayaa u xaqiijiyay inay dawladda Yemen ka qabatay garoonka Sanca Andargachew Tsege oo uu ku ahaa maritaan, ka dibna u gacan galisay Itobiya. Sidoo kale saraakiil ka tirsan xafiiska commonwealth ee Ingriiska ayaa gaadhsiiyay xaaskii ninkaa la dhiibay in safiirkaYemen u fadhiya Ingriika uu u sheegay inay dawladiisa u dhiibtay Itobiya Andargachew Tsege.
Mrs Anna Gommes oo xubin ka ah baarlamaanka Yurub ayaa ku codsatay dawladda Ingriiska inay xooga saarto sidii ninkaa looga soo dayn lahaa Itobiya, maadaama ay tahay dawladda 1aad ee siisa mucaawanada.
“Haddii aanay dawladda Ingriiska wax ka maamulin afduubka iyo u dhiibitaanka Mr Andargachew Tsege dawladda Itobiya oo la hubo inay jidh dil u gaysanayaan oy ku eedeyn doonaan wax kasta ka dibna ay dil ku xukum doonaan, waa inay dawladda Ingriiska ka shaqaysaa in si dhaqsaha loo soo daayo Mr. Andargachew Tsege.” Ayay tidhi Anna Gommes. Halkan Riix – BBC-
Waxay ahayd buu yidhi afhayeenka ururka Ginbot7 dawladda Ingriiska inay marhore arintan xooga saarto kana shaqayso siday uga soo dayn lahayd.
“Waxay u muuqataa inay dawladda Ingriiska ku lug leedahay afdubkan, sababtoo ah wax talaaba ahkamaqaadin ilaa hadda.” Ayuu raaciyay afhayeenka G7 Mr Ephrin.
Ginbot 7 waa ururka ugu weyn mucaaradka Itobiya ee qawmiyadda Amxaarada, wuxuuna kula baxay magaca Ginbo 7 doorashooyinkii ka dhacay Itobiya 15 May 2005, kolkaasoo ay toogteen ciidamada booliska dadkii banaanbaxayay ee diiday musuqmaasuqa lagu sameeyay codkoodii.